COLE CITRENBAUM နှင့် JACOB RESKE တို့သည်ယေးလ်၏အပူဆုံးဂီတအဖွဲ့သစ် OPIA ဖြစ်သည် - နှုန်းထားများ
ကိုးလ် Citrenbaum နှင့်ယာကုပ် Reske Opia, ယေးလ်ရဲ့အပူဆုံးဂီတနှစ်လုံးကိုဖြစ်ကြသည်
သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်အခန်းထဲသို့ဝင်သောအခါကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်ဆုံးသီချင်းအသစ်ကိုအသည်းအသန်ကြိုးပမ်းနေသည်။ သင်ဤ Yalie ညာဘက်အားဖြင့်သိသလော ဒီသီဆိုသူကငါတို့အတန်းထဲမှာပေါ့။ ထိုအကအားလုံးကိုစတင်ပုံကိုပါပဲ။
သူအချိန်မီ Willoughby ရဲ့ညာဘက်သို့လမ်းလျှောက်အဖြစ်ကိုးလ် Citrenbaum '17 စင်ကြယ်သောဖြတ်နှင့်ဖြေလျော့ပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ Jacob Reske '14 သည်အတိအကျဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သည်။ ၁၀ မိနစ်အကြာတွင်နားကြပ်ကိုလည်ပင်းပတ်ပတ်ထားသည့်အပြင်တောင်းပန်ပြီးသည်။ သူတို့နှစ်ယောက်စလုံး Opia ကိုတီးဝိုင်းအဖြစ်ဖွဲ့စည်းသည်။
သူတို့ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးတစ်ခုတည်း Falling ခေါင်းစဉ်သူတို့ကို Spotify ရဲ့ယူအက်စ်ဗိုင်းရပ်စ်ထိပ်တန်း 50 နှင့် Billboard ရဲ့ပေါ်ထွက်လာအနုပညာရှင်တွေစာရင်းတွင်တစ် ဦး ပွဲချင်းပြီးဆင်းသက်တက်မှုတ်ခဲ့သည်။ ငါ fangirl ဖို့အတတ်နိုင်ဆုံးကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့် The Tab မှာ Opia နဲ့အတူထိုင်နေတဲ့ခံစားချက်ကိုဖော်ပြဖို့တေးဂီတအချို့ရှိသည်။
ကိုးလ်: ငါတို့ထင်, ငါဘွဲ့ကြိုအဖြစ်တစ် ဦး ချင်းစီကတခြားသိတယ်။
Jacob: t အိုကေ။ ကျွန်တော်အနည်းငယ်ကွဲပြားတဲ့အဖြေတစ်ခုပေးချင်တယ်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာမေးခွန်း (၃၀) နဲ့ဘယ်လိုတွေ့ဆုံခဲ့သလဲဆိုတာကိုပြီးအောင်လုပ်ပြီးပါပြီ။ ဒါပေမယ့်အများစုမှာမန်နေဂျာများသို့မဟုတ်အေးဂျင့်များဖြစ်ခဲ့တာကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပုံပြင်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းချုံ့ချဲ့ပြီးပါပြီ -
ကို C: - စုံတွဲတစ်တွဲစာကြောင်းများ blurb ကြိုက်ရန်။
J: အမှန်အတိုင်းပြောရရင်မင်းရဲ့ခွေးဘီလူးများနေ့ရက်များမှာမင်းတို့ A A Squared (အီလက်ထရွန်နစ် cappella အုပ်စု) ကိုလာကြည့်တဲ့အခါငါတို့တွေ့ခဲ့တယ်။
ကို C: ဒါကတကယ်စူပါစစ်မှန်တဲ့ပါပဲ။ ငါကခွေးဘီလူးနေ့ရက်များကိုသွားလည်ရင်းကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တယ်၊ သူကမင်းကိုဂီတအရာတွေအားလုံးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးခွင့်ပေးတယ်၊ ငါ့သူငယ်ချင်းတွေအခုအချိန်မှာအစမ်းလေ့ကျင့်နေကြတယ်။ ဒါနဲ့ A Squared ရဲ့နေ့တွေမှာယာကုပ်နဲ့သူ့သူငယ်ချင်းအားလုံးကိုတွေ့ခဲ့တယ်။
J: အဲဒီနေ့မှာငါတို့လုပ်ခဲ့တဲ့သီချင်းကိုငါမှတ်မိသေးတယ်။ အရမ်းဆိုးတယ်
C: အိုး၊ မင်း၊ မင်းယောက်ျားတွေအရမ်းတော်တယ်ထင်တာမှတ်မိသေးတယ်။ သငျသညျ Retrograde သို့မဟုတ်တစ်ခုခုလုပ်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက်မှာတော့ငါဟာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်အထိတကယ်စကားပြောခဲ့တယ်လို့မထင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့သူတည်ရှိတယ်ဆိုတာငါသိတယ်ငါနှစ်ထပ်ကိန်းကိုတူးခဲ့တယ်။ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်၏ cappella အုပ်စုဖြစ်သော Spizzwinks အယ်လ်ဘမ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပြီးသူသည်ကောင်းမွန်သော tracker နှင့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်သည်ယာကုပ်ကိုအကြံပြုခဲ့သည်။ ဒါကြောင့်ငါထွက်ရောက်ရှိခဲ့ပြီးငါတို့သည်သူ့ကိုငှားရမ်းတက်အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ ငါအယ်လ်ဘမ်အတွက်ငှားရမ်းအဖွဲ့၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ခဲ့သည်, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့မှတ်တမ်းတင်စဉ်ငါနှင့်အတူအချိန်အများကြီးဖြုန်းအဆုံးသတ်ခဲ့သည်။
J: The Sing Off ပြီးတာနဲ့ကျောင်းဝင်းထဲပြန်ဝင်လာပြီးကျွန်တော့်မှာဒီပြသမှုကနေတကယ့်ကိုသေးငယ်တဲ့ပရိုဖိုင်းရှိတယ်ဆိုတာသဘောပေါက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်လူတွေကျွန်တော့်ဆီလာပြီးအို၊ မင်းက cappella ထုတ်လုပ်သူပဲ! ထိုအခါငါစိတ်ဝင်စားဖို့ uhhhh ကဲ့သို့! ပြီးတော့လူတွေကကျွန်တော့်ကိုငွေသွင်းပေးဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကငါအလုပ်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး, ငါ cappella အုပ်စုများမှတ်တမ်းတင်ခဲ့တာပါ။
C: Spizzwinks အယ်လ်ဘမ်ကိုအတူတကွမှတ်တမ်းတင်ရတာဟာရယ်စရာကောင်းလောက်အောင်အချိန်တွေကုန်လွန်ခဲ့တာပဲ။ ယာကုပ်ဟာတကယ့်ထုတ်လုပ်သူတစ်ယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုငါသဘောပေါက်လာတယ်။ ငါတို့တွဲကစားနေချိန်မှာသူကကျွန်တော့်အတွက်ဒီစည်းချက်တွေအားလုံးကိုတီးခတ်ခဲ့တယ်။ တကယ်တော့သူတို့ကတကယ့်ကိုတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့နွေရာသီမှာငါတို့နှစ်ယောက်စလုံး LA မှာရောက်ခဲ့တယ်၊ ဒါကြောင့်ကျွန်မရဲ့အလုပ်သင်ပြီးတဲ့နောက် LA ကိုဖြတ်ပြီးမြို့ဘတ်စ်ကားကိုသူလုံးဝမပြင်ဆင်ရသေးတဲ့တိုက်ခန်းကိုခေါ်သွားမှာပါ။ လူတော်တော်များများကဒါကဂီတစတူဒီယိုတစ်ခုမှာဖြစ်ခဲ့တာလို့လူတွေကထင်ကြလို့ပါ။
J: - ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကငါ့အလွတ်၊ သံမဏိတိုက်ခန်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တယ်။
ကို C: ငါထင်တစ်ခုလေထုမွေ့ရာဖြစ်ကောင်းထင်ပေမယ့်အဲဒါဖြစ်ခဲ့သည်။
ဂျေ: အဲဒီမှာအဲဒီမှာ 105 ဒီဂရီဖြစ်ရပြီ, ဒါကြောင့်ကျနော်တို့ညအချိန်တွင်သွားရလိမ့်မယ်။ အခန်းထဲမှာလေဝင်လေထွက်မရှိဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါတို့ကိုယ်ပိုင်ချွေးတွေထိုင်နေတာပဲ။ ဒါပေမယ့်တစ်ညမှာငါတို့ဘာဂါတွေစားဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်၊ ငါဘာဝယ်ခဲ့တာလဲ။ ခွက်လား။ ဒါမှမဟုတ်လမ်းဆုံလမ်းခွ
C: အင်း။ သူကနောက်ဆုံးမှာငွေထည်ရှိလို့ငါတို့အရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားမိတယ်။ ဒါပေမယ့်စနေ၊ တနင်္ဂနွေနေ့တွေမှာ Ventura ရှိငါ့အိမ်သို့သွားပြီးမနက်ခင်းမှာ ၀ င်ကြည့်သည်။
C: Opia ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာဒီ Tumblr ဘလော့ဂ်မှာတွေ့ရပြီးထူးဆန်းတဲ့ဝမ်းနည်းခြင်းအဘိဓာန်လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘလော့ဂ်ကိုဖွင့်လှစ်သောလူ၏အဆိုအရ၎င်းသည်မျက်လုံးချင်း၏ပြင်းထန်မှု၊ ထိုးဖောက် ၀ င်ရောက်မှုနှင့်ရငျးနှီးမှုကိုရည်ညွှန်းသည်။ သငျသညျတစ်စုံတစ် ဦး နှင့်အတူမျက်စိအဆက်အသွယ်လုပ်သည့်အခါဒါကြောင့်တကယ်ထိုးဖောက်မှုဒါပေမယ့်လည်းတကယ်ကောင်းတဲ့ခံစားရသည့်အခါပါပဲ။
ကို C: ဟုတ်, အတိအကျ။
J: Opia တီးဝိုင်းလို့နာမည်ပေးပြီးကတည်းကတခြားတီးဝိုင်းအတော်များများလည်းအတူတူပဲဆိုတာကျွန်တော်သိလိုက်ရတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏နာမနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးခြင်းသို့မဟုတ်မိမိကိုယ်ကိုဖြောင့်မတ်ခြင်းတရားရှိခြင်းမရှိသော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုစိတ်ဆိုးနေသော Opias များထွက်ပေါ်လာနိုင်သည်။ ထို Opias ကိုကျွန်ုပ်တို့ပြောချင်သည်မှာကျွန်ုပ်တို့အလွန်ဝမ်းနည်းပါသည်။ ကျနော်တို့ကဒီမှတဆင့်မထင်ခဲ့ပေ။
မိန်းကလေး squirt အစာရှောင်ခြင်းလုပ်ဖို့ဘယ်လို
ကို C: အယ်လ်ဘမ်အနုပညာလက်ရာများပင်ငါတို့တူညီသောအရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘယ်မှာအလုံအလောက်ဆင်တူသည်။ ကျမတို့ Falling ကိုဖြန့်ချိခဲ့ပြီးနောက်နှစ်ရက်အကြာမှာတော့ Still Standing လို့ခေါ်တဲ့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အတွက်လည်းပျော်စရာကောင်းခဲ့ပါတယ်။
ယောက်ျားတွေအတွက်အခန်းကဏ္aတစ်ခုခွဲခြားထားသလား။ တစ်ယောက်ကအဆိုတော်လား၊ တစ်ယောက်ကထုတ်လုပ်သူလား။
J: ကောင်းပြီ၊ ဒါကပုံမှန်အားဖြင့်ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်သလဲ၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါထက်အများကြီးပိုပါတယ်။ ငါသည်လည်းအဆိုတော်တစ် ဦး လည်းဖြစ်၊ ကိုးလ်လည်းထုတ်လုပ်သူတစ် ဦး ဖြစ်သည်၊
Soooo, တစ်စုံတစ် ဦး အကြောင်းကျဆင်းနေသလဲ ဒါမှမဟုတ်မင်းတို့ကမင်းရဲ့စိတ်ကူးတွေကိုဆွဲထုတ်ခဲ့တာလား။
လော်ရာသည် ၃၆၅ တွင်မည်သို့သေဆုံးခဲ့သနည်း
ကို C: ဟုတ်ပါတယ်သူတစ်စုံတစ် ဦး အကြောင်းကိုပါ!
J: ငါဒီအဆိပ် looove များအတွက်ကျသွားမဟုတ်ပါဘူး။
ကို C: ကျနော်တို့ကသူတို့သီချင်း၏စာသားများကိုရေးသားရှိရာပန်ကာက်ဘ်ဆိုက်များတစည်းကိုမြင်ရပါတယ်, သူတို့ထဲကအများစုဟာလုံးဝမှန်ကန်ပါပြီ, ဒါပေမယ့်အရမ်းကြောက်မက်ဘွယ်သောခဲ့သောတစျခုရှိခဲ့ကျနော်တို့ကအစဉ်အမြဲရယ်မောခဲ့ကြသည်။
J: အိုကေ၊ မင်းရဲ့နောက်ဆက်တွဲမေးခွန်းကိုကြိုတင်မျှော်လင့်ထားတယ်၊ ငါတို့မနေ့ကငါတို့ရရှိခဲ့တဲ့ဒီအရာကိုရှာမယ်။
ကို C: အိုဘုရားအိုး! ကျနော်တို့ပန်ကာဗွီဒီယိုများကိုစတင်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ထဲကတစ်ခုဟာ Falling နောက်ခံမှာကစားနေတဲ့ဂျပန်ကာတွန်းပဲ။ ကောင်းလိုက်တာ။
J: ကောင်းပြီ၊ ငါတို့ဟာ assholes တွေဖြစ်လာကြတယ်၊ ငါတို့ရဲ့သူငယ်ချင်းတွေနဲ့စကားမပြောကြဘူး၊ အင်တာဗျူးအတွက်နောက်ကျတယ်။
C: ဟားဟား။ ငါမသိရပါဘူး၊ ဒါအရမ်းထူးဆန်းတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ယနေ့သီတင်းနှစ်ပတ်အကြာမှာကျွန်မရဲ့သီချင်း Spotify မှာ New Music သောကြာနေ့မှာပြောခဲ့တဲ့ငါ့သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ဆီကစာတစ်စောင်နဲ့နိုးလာတယ်။ ငါတို့သည်လည်းကမ္ဘာပေါ်မှာအဘယ်အရာဖြစ်ပျက်နေသနည်း
J: ငါတကယ် Spotify ကောင်လေးမဟုတ်ပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကအပြည့်အဝအလေးချိန်နားမလည်ခဲ့ပေ။
ကို C: ငါဖြစ်၏။ ငါသောကြာနေ့နယူးဂီတမှာငါတို့ပြောခဲ့တယ်၊ သူသွားပြီ၊ ထိုအခါငါတူ, သင်, နားမလည်ကြဘူးဖြစ်ခဲ့သည်။
J: ကောင်းပါပြီ၊ ဂီတကိုအရမ်းတော်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ငါနားထောင်တဲ့ဂီတအမျိုးအစားကပိုပြီးထူးဆန်းတယ်။ ငါကလက်ရှိ R&B ပစ္စည်းတွေကိုပိုပြီးနားထောင်ပေးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကရိုးရာဂီတနောက်ခံကနေလာတယ်။
ကို C: ငါနောက်ကွယ်မှအဖြစ်ပိုမြင်အခြားနောက်ကွယ်မှကြည့်ရှုပါ။ ဒါပေမယ့်ငါထင်သောအရာကိုယာကုပ်သည်စူပါအခြားရွေးချယ်စရာဖြစ်ပြီးငါစူပါခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်သောကြောင့်ဂီတဒီတော့အေးမြစေသည်, ဒါကြောင့်အတူတကွကျွန်တော်အလယ်၌တစ်ခုခုလုပ်ပါ။
ကို C: ဟုတ် ... ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးအချိန်ကြာမြင့်စွာဂီတအောင်ခဲ့ပြီးသောကြောင့်နှစ်ပေါင်းများစွာငါတို့ရောက်ရှိနေပြီနှင့်ငါတို့ပစ္စည်းပစ္စယမြှင့်တင်ရန်ကြိုးစားနေခဲ့ကြသောကြောင့်, ဒါဟာရယ်စရာပါပဲ။ သို့သော်ရုတ်တရက်ဆိုရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤအီးမေးလ်များကိုအရေးကြီးသောလူများ၊ သို့မဟုတ်ဂီတလုပ်ငန်းတွင်အမှန်တကယ်ပါ ၀ င်သူများထံမှရရှိသည်။ ဒါကြောင့်တကယ်ကိုအေးမြခဲ့ပါတယ်။
J: ငါရိုးသားဖို့ဒီအစဉ်အဆက်ငါ့ထံသို့ဖြစ်ပျက်မယ်လို့မထင်ခဲ့ဘူး! ငါပစ္စည်းပစ္စယဖြန့်ချိပြီးပြီနှင့်ကိုးလ်သင်ဘယ်နေရာမှာသွားပြီကြောင်း Soundcloud အပေါ်ထွက်ထားကြောင်းပစ္စည်းပစ္စယဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သင်ကမ္ဘာပေါ်တွင် dopest အရာဟုသင်ထင်သောသီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုလုပ်နိုင်သည်၊ သို့သော်သင်အမှန်တကယ်မသိသော! သင်ကမှန်ကန်စွာမြှင့်တင်မပေးသောကြောင့်၊ လူတစ် ဦး ကြိုက်နှစ်သက်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သင်တစ်နေ့တာ၏မှားယွင်းသောအချိန်တွင်ဖြန့်ချိခဲ့သောကြောင့်သီချင်းတစ်ပုဒ်ကျရှုံးနိုင်သည်။ ငါအခုထိလေ့လာခဲ့တဲ့အရေးအကြီးဆုံးအရာကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖောင်းပွမှုကနေခွဲထုတ်ဖို့ပဲ။ လူများကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မည်, ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲအကောင်းဆုံးသီချင်းပါပဲ! ပြီးတော့ခင်ဗျားခေါင်းကိုညိတ်ပြီးခါးသီးတယ်။ ငါတို့ကြိုက်တယ်၊ ပျော်တယ်လို့ငါထင်တယ်၊ မင်းလည်းမင်းဒါကိုသဘောကျတယ်။ ခင်ဗျားကတကယ်တော့ဖောင်းပွတာကိုကျမခံချင်တာထက်အရာဝတ္ထုတွေအကြောင်းပိုပြီးရည်မှန်းချက်ရှိအောင်လုပ်ဖို့လိုတယ်။
C: သီချင်းကလူကြားတာကိုတကယ်ကံကောင်းတယ်။ ကျနော်တို့ကစက်တင်ဘာလတဝိုက်ပြုလေ၏ခဏအပေါ်ထိုင်တော်မူ၏။ ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုဂီတဘလော့ဂ်များတစ်ခု၌ပို့လိုက်ပြီးချက်ချင်းပင်၎င်းတို့ထဲမှတစ် ဦး ကတုံ့ပြန်လိုက်သည်။ ထိုအရာကရူးသွပ်နေတာပဲ၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဲဒါကိုဘာကြောင့်အလုပ်လုပ်တာလဲ၊ ငါတို့အဲဒီအီးမေးလ်ကိုပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကသေးငယ်တဲ့အရာဖြစ်လို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
မင်းတို့နှစ်ယောက်လုံးမှာ cappella နောက်ခံရှိကြတဲ့အတွက်မင်းရဲ့ဂီတကိုလုံးလုံးလျားလျားလွှမ်းမိုးမှုရှိတယ်လို့မင်းပြောမှာလား။
ဂျေ: အလွန်တိုက်ရိုက်ဒါ။ ဂစ်တာ မှလွဲ၍ တူရိယာများအားလုံးသည်အသံနမူနာများဖြစ်သည်။ သူတို့ကိုငါနှစ်ထပ်ကိန်းကနေယူသွားမှာပါ၊ ဒါကြောင့်ကျွန်တော့်နမူနာစာကြည့်တိုက်အများစုမှာအသံတွေပါ ၀ င်တယ်။
J: ဟုတ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အခုငါကြိုက်တဲ့တူရိယာတွေကိုသုံးနေပြီ၊ ဒါကပိုလွယ်လို့ပေါ့။
J: ဒါကကိုးလ်ပါ။ ငါ falsettos အားလုံးသီခငျြးဆို ငါဒီဟာကိုငါရှူရှိုက်မိပြီးအသံနိမ့်ခြင်းနှင့်အသံကျယ်ကျယ်ဖြင့်မှားယွင်းစွာပြောခြင်းများများပိုသောသီချင်းကိုဆိုလို။ သူဆန့်ကျင်ဘက်ပြုလိမ့်မည်။ တစ်ချိန်တည်းတွင်သီချင်း ၁၀ ပုဒ်ဖြစ်နိုင်သည်။
ကျန်မင်းရဲ့အယ်လ်ဘမ်ရဲ့ကျဆုံးခြင်းဟာ Falling နဲ့အတူတူလား။
ဂျေ: အဲဒီမှာသွားကြဖို့နည်းလမ်းများစွာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ငါပဲငါတို့ခံစားရတယ်အဘယျသို့နှလုံးသားများမှာဘယ်မှာရေးသားဖို့တာပေါ့ထင်ပါတယ်။ ကျနော်တို့တကယ်ကတွက်ချက်ချင်ကြဘူး။
ကို C: ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အတူတကွရေးသားခြင်းနေလျှင်, ငါတို့သည်ဖြစ်ကောင်းကိုယျ့ကိုယျကိုအလားတူပုံစံများသို့ကျသွားတွေ့ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ဟာတူညီတဲ့သီချင်းတွေဖြစ်မှာမဟုတ်ပေမဲ့သူတို့မှာ DNA အတူတူပဲရှိလိမ့်မယ်။
နောက်ဆုံးအနေနဲ့၊ မင်းတစ်ယောက်ချင်းစီအကြောင်းဒါမှမဟုတ်မင်းပရိသတ်တွေသိစေချင်တဲ့တစ်ခုခုအကြောင်းငါ့ကိုပြောပြပါ ဦး ။
သူစိမ်းအမှုအရာရာသီ3သတင်းစာသွန်း
ကို C: အိုကေ, ယာကုပ်အကြောင်းကိုပျော်စရာတကယ်တော့သူဟောင်းဗီဒီယိုဂိမ်းများကိုအထူးသဖြင့် Lego အဘိဓါန်ကျွန်းကိုစွဲလမ်းနေသည်။ ဒီတော့ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကသူဟာ Lego Island အတွက်အရင်းအမြစ်ဖိုင်တွေအားလုံးကိုရှာတွေ့ပြီးအသံအားလုံးကိုထုတ်ယူလိုက်ပြီးဒီနမူနာအားလုံးမှာဖောင်းပွနေတယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့သီချင်းတစ်ပုဒ်ကိုနားထောင်နေလိမ့်မယ်။ ပြီးတော့ငါနောက်ကွယ်မှအရာတစ်ခုခုကိုကြားနှင့်တူပါလိမ့်မယ်ယာကုပ်အမျိုးသည်နောက်တဖန် Lego ကျွန်းဖြစ်သနည်း မင်းငါ့ကိုနောက်နေတာလား?
J: ဒီတော့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်ငါ Lego ကျွန်းနမူနာကိုသုံးတာမဟုတ်ဘူး။ Lego ကော်ပိုရေးရှင်း၊ ငါ့ကိုတရားစွဲမပေးပါ Lego ကျွန်းကိုအသုံးပြုခြင်းအတွက်ကိုးလ်ကအမြဲတမ်းကျွန်တော့်ကိုသံသယရှိနေသောကြောင့်၎င်းသည် Lego ကျွန်းရှိ shit ကိုကျွန်ုပ်နေရာတွင်ထားလျှင်သူသည်အခြားမည်သည့်ပစ္စည်းကိုမျှခိုးယူခြင်းမရှိသောကြောင့်သူမအတွက်အနီရောင်သမင်ကြောင်မျိုးဖြစ်သည်။
ကို C: နေသမျှကာလပတ်လုံး Lego ကိုကျွန်းမရှိသလောက်သကဲ့သို့ငါဂရုမစိုက်ပါဘူး။
ဂျေ: ကောင်းပြီ, ကိုးလ်အကြောင်းကိုပျော်စရာတကယ်တော့သူကရေဗက္ကာက Black ရဲ့ Tour တီးဝိုင်းများအတွက်ဂစ်တာသမားဖြစ်ခဲ့သည်။
ကို C: တစ်နေ့တွင်ကျွန်ုပ်ဖုန်းခေါ်ဆိုခြင်းခံရပြီး Blues ၏ House တွင်ကစားရန်တောင်းဆိုခံခဲ့ရသည်။ ဒါကြောင့်သိသာတဲ့ငါဟုတ်ကဲ့ဟုပြောသည်, ဒါပေမယ့်ငါအနုပညာရှင်သူကိုမသိခဲ့ပါ။ အဲဒီကိုရောက်တော့ရေဗက္ကာက Black ပဲ။
ကို C: ဟုတ်ကဲ့, ဒါသိပ်ပျော်စရာပဲ! တီးဝိုင်းဟာအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ပါရမီရှိတဲ့အတွက်ကျွန်မအဲဒီမှာရှိနေရတာကိုတကယ်ပျော်ခဲ့တယ်။ ငါအနှစ်သက်ဆုံးဇာတ်လမ်းကတော့သူမကသူမကားပေါ်မှာအင်တာဗျူးလုပ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ပြပွဲကိုမြှင့်တင်ဖို့တစ်ခုခုလုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ရေဗက္ကာသွားတယ်၊ ရှေ့ထိုင်ခုံမှာသွားသင့်သလား၊ ဒါမှမဟုတ်နောက်ထိုင်ခုံလား။ ထိုအခါငါမေးခွန်းတစ်ခုကိုဘယ်လိုတုံ့ပြန်ရမည်ကိုမသိခဲ့ပါ။